Livestorm: သင်၏အတွင်းပိုင်း webinar နည်းဗျူဟာကိုရေးဆွဲပါ၊ စီရင်ပါ၊ Martech Zone
Livestorm - သင်၏အတွင်းပိုင်း Webinar နည်းဗျူဟာကိုရေးဆွဲပါ၊ စီရင်ပါ၊
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 3, 2020 ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 3, 2020 Douglas Karr
ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့်တိုးတက်မှုကြီးထွားလာသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်အွန်လိုင်းဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းကွန်ဖရင့်ဖြစ်စေ၊ အရောင်းသရုပ်ပြခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၊ ဖောက်သည်သင်တန်းပေးခြင်း၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းအစည်းအဝေးများဖြစ်စေ…ကုမ္ပဏီအများစုသည်ဗွီဒီယိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြေရှင်းနည်းများအတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရသည်။
အ ၀ င်အထွက်မဟာဗျူဟာများကိုယနေ့ခေတ် webinars များကမောင်းနှင်နေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အသံကဲ့သို့မလွယ်ကူပါ။ အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲဒေါင်းလုပ်ချခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှု၊ ဆင်းသက်နိုင်သည့်စာမျက်နှာများ၊ ပေါင်းစည်းခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ဗွီဒီယိုဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်မှုသည်အစမှအဆုံးထိရောက်သောအွန်လိုင်းဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်အမြဲလိုလိုလိုအပ်သည်။
Livestorm - On-Demand၊ Live နှင့် Automated Webinars
Livestorm သည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အလိုအလျောက်အာရုံစူးစိုက်ထားသောပိုမိုရိုးရှင်း။ ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် webinar ဆော့ဖ်ဝဲကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
မည်သည့် webinar ပုံစံကိုမဆိုဆော့ (ဖ်) ဝဲကို အသုံးပြု၍ သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
တိုက်ရိုက် Webinars - Livestorm သည် browser ကိုအခြေခံသော HD ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့် software မျှ download ပြုလုပ်စရာမလိုပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် screen sharing, Youtube သို့မဟုတ်အခြား live-stream များကိုသင်၏ webinar သို့ပေါင်းစည်းစေနိုင်သည်။
ထပ်တလဲလဲ Webinars - ကဏ္multipleစုံပါ ၀ င်သော ၀ က်ဘ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး၊ registration ည့်သည်များသည်သင်၏မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာမှရွေးချယ်ထားသောနေ့ရက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော Webinars - အကယ်၍ သင်သည်ပြီးပြည့်စုံသော webinar အတွေ့အကြုံကိုလိုချင်ပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏ webinar ကိုပရိသတ်မှကစားရန်ကြိုတင်ပြီးတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကစားရုံပဲ!
On-Demand Webinars - သင်၏ webinar ကိုတင်ပါ။ သူတို့လိုချင်သည့်အခါအလားအလာသင့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ခွင့်ပေးပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင့်ရဲ့ webinars များကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန်သိုလှောင်မှုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
Webinar မှတ်ပုံတင်ခြင်း - စိတ်ကြိုက်ပုံစံများသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်ဆောက်ထားသည်။ သင်၏အလားအလာကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီစေရန်ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်များထည့်ပါ။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံစံများကိုပင်ထည့်နိုင်သည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက် - သင်၏အဆက်အသွယ်များအားတင်သွင်းပါ၊ ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုပို့ပါ၊ မှတ်ပုံတင်သူများအတွက်တက်ရောက်ရန်သတိပေးချက်များကိုအလိုအလျောက်ပို့ပါ။
ပရိသတ် - စကားပြောခြင်း၊ စစ်တမ်းများ၊ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများနှင့်တင်ဆက်သူများအားလုံးသည်သင်၏ webinar နှင့် real-time တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
သတင်းပို့ခြင်း - မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ရည်ညွှန်းခြင်း၏အရင်းအမြစ်ကိုဖမ်းယူပါ၊ တက်ရောက်သူအားကြည့်ရှုပါ၊ ပါဝင်မှုကိုခြေရာခံပါ။
Tag အကောင်အထည်ဖော်မှု - Google Analytics, Intercom, Drift (သို့) အခြား script tag များကိုသင်၏မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာများတွင်ထည့်ပါ။
ပေါင်းစည်းမှု - သင်၏မှတ်ပုံတင်သူအချက်အလက်အားလုံးကိုရယူခြင်း၊ မဲပေးခြင်း၊ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားလုံးကိုရယူပါ၊ သို့မဟုတ်၎င်းကို Zapier၊ လျှော့ချရန်၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၊ , Microsoft Dynamics, Pipedrive, Salesmate, Zenkit, ဒါမှမဟုတ် SharpSpring ။
Webhooks နှင့် API - Livestorm ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ခိုင်မာသော API နှင့် webhook များနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် သငေ်္ဘာ.
Tags: ဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသငေ်္ဘာMicrosoft Dynamics ကိုOn-demand webinarsရေနံချောင်းpre- မှတ်တမ်းတင်ထားသော webinarsထပ်တလဲလဲ webinarsရောင်းသူအရောင်းစာရေးsharpspringwebinarwebinar အီးမေးလ်ကိုသတိပေးချက်များwebinar စျေးကွက်ရှာဖွေရေးwebinar ပလက်ဖောင်းwebinar မှတ်ပုံတင်Webinarszenkit
Omnify - အွန်လိုင်းကြိုတင်မှာကြားခြင်း၊ ကြိုတင်စာရင်းပေးခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းပလက်ဖောင်း
အီလက်ထရွန်းနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစာရင်းအင်း - COVID-19 ကူးစက်ရောဂါနှင့်လက်လီရောင်းချခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းပေါ်ပိတ်ဆို့ခြင်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု